Doorashada soo socota lama saadaalin karo cida ku guuleysan doonta - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Asbuuca siyaasada Almedalen
Doorashada soo socota lama saadaalin karo cida ku guuleysan doonta
La daabacay onsdag 3 juli 2013 kl 15.45
Yaa ku guuleysan kara doorashada soo socota?
Ayada oo ay naga xigto mudo hal sanno ah doorashada qaran ee Iswedhen ayaa waxaa magaalada Visby xowli ugu socda asbuuca siyaasada ee loo yaqaan Almedalen. Xisbiyada ayaa soo bandhigaya hindisiyaaal iyo tallabooyin ay doonayaan in ay ku soo jiitaan taageerada codbixiyaasha. Hadaba qoladee ayey u badantahay in ay reyso doorashada soo socota?
Xisbiyada laysku yiraahdo rödgrön (gaudu iyo cagarka) ayaa tirokoobka taageerada codbixyaasha ku wata dhamaan dhamaan tirokoobyada dhawaanahaan la sameynayey. Laakiin xisbiyada dowladda wadaaga ah ee alliansen ayeysan xataa rajadooda liidan, sidaas waxaa yeri David Ahlin oo madax ka ah rugta tirokoobta afaakaraha IPsos.
- Wax badan ayaa tilmaamaya in uu guuleysan doono Stefan Löfven dowladdana la badeli doono sannadka soo socda. Laakiin waxaa sidoo kale jira in tirokoobka codbiyaasha ay hadba dhinac u janjeersanayo sannooyinkaan danbe, in ka badan sidii ay taariikhiyan ahaan jirtey. Marka waxaa dhici karta in taageerada dhanka kale u badato, ayuu yeri.
Tirokoobyada laga sameeynayey dhanka ay codbixiyaasha taageeradooda u badantahay oo bariyaahaan iskasoo dabo dhaceyey ayaa waxaa jira iftiin yar oo u hiiliniya xisbiyada Alliansen, sida uu qabo David Ahlin oo ka socdo rugta Ipsos. Taas oo ay ugu weyntahay kalsoonida weyn ay codbixiyaashu ku qabaan ra’iisal wasaaraha Fredrik Reinfeldt iyo wasiirkiisa dhaqaalaha Anders Borg.
- Waxey weli ka heystaan kalsooni weyn codbixiyaasha. Codbixiyaasha waxey aad ugu kalsoonyahiin xisbiga Moderatka marka laga hadlayo sida dhaqaalaha Iswedhen loo maareeyo. Waana arin markasta oo ay doorashado soo dhowdahey aad muhiim u ah, ayuu yeri.
Dhanka kale boqokii 50 codbixiyaasha ayaa weli u arka in xukumada ay heyso shaqo fiican. Laakiin waxaa jira dhanka kale waxyaabo u hiilinaya mucaaradka dalka. Inkstoo kalobar codbixiyaasha ay u arkaan in dowladda shaqo fiican heyso hadana wax ka yar sadex meelood ayaa u arka in hor-u-marka dalka uu hayo dhabo sax ah, sida uu yeri David Ahlin.
- Waxaa maanta ay qabaan codbixiyaal badan welwel weyn oo ah waddanka hor-u-markiisa. Waxaa jira codbixiyaal dareensan in hor-u-marka Iswedhen hayo dhabo qaldan kuwaas oo ka badan inta aamisnan in hor-u-marka uu dhabo sax ah hayo.
Kalsoonida codbixiyaasha u hayaan siyaasada xisbiga Socialdemokratiga ayaa baryahii danbee qaybo badan ka soo xoogeystey, sida uu leeyahey David Ahlin.
- Xisbiga Socialdemokraterna waxey aad u xoojiyeen kalsoonidooda qaybo badan oo muhiim ah arimaha siyaasada. Kalsoonida arimaha iskuulka iyo tacliinta aad bay u xoojiyeen oo dhankaas xisbigaas ayaa manta ah ka hogaamiyaha dhanka kalsoonida, sidoo kalena waxey xojiyeen kalsoonida la xiriirta arimaha shaqada , taas oo ah arimaha siyaasadeed ee ay codbixiyaasha ahmiyad weyn siiyaan.
Dhanka kalsoonida arimaha shaqada ayaa ah mid barbar dhac ah labada xisbi ee waaweyn Socialdemokratiga iyo Moderatka. Laakiin arimaha caafimaadka iyo daryeelka waayeelka ayaa ah arimaha ay codbixiyaasha aad ugu kalsoonyahiin in xisbiga socialdemokratiga yahay kan ugu siyaasad wanaagsan. Xisbiga Moderaatkana waxey kalsoonidooda aad ugu weyntahay arinta muhiimka aadka ugu ah codbixiyaasha ee ah maareynta dhaqaalaha dalka. Laakin waxaa sidoo kale soo cadaneysa in xisbiga Socialdemokratiga oo dib ugu noqdey xisbi ay doorbidi karaan codbixiyaasha dhexdhexaadka ah, sida uu qabo David Ahlin, codbixiyaashaas oo ah kuwo ay tahay in xisbiyada soo jiitaan hadey doonayaan in ay guul ka garaan olelahooda doorasho. Taas labadii doorasho ee nasoo dhaaftey xisbiga Socialdemokratiga ku guuldaresytey in uu so jiito.
Tirokoobkii ugu danbeeyey ee xaafiska dhexe ee torkoobka SCB sameeyey bishii maj ayaa muujiyey in aad u soo bateen codbixiyaasha taageri jirey Moderat balse iminka taagersan Socialdemokratiga.
Doorashada soo socotana waxaa looga fadhiyaa labada garab in ay soo bandhigaan siyaasad wadata hindisiyaal cadcad, sida uu yeri David Ahlin. Balse su’aasha ah cida ay xisbiga Socialdemokratiga doorbidi doonaan in ay xukun wadaag la noqdaan hadii olalaha doorashada ku guuleystaan ayaa noqon karta caqabada soo wajahi doonta xisbiga Socialdemokratiga. Waayo waxaa adag Iswedhen in xisbi keligiis helo akhlibiyada kuraasta barlamaanka. Saas darteed uu xisbigii helaa codadaka ugu badan waxuu ku qasbanyahey in uu taageero ka helo xisbi kale si uu ugu helo xukumada uu soo dhiso xisbigaas akhlibiyada taageerada ee barlamaanka. Laakiin dabeysha ayaa hada u dhaceysa dhanka xisbiga Socialdemokratiga. Waana xisbiyada Alliasen kuwo ay hada tahay in ay sharaxaad ka bixiyaan dhibka , ayuu yeri David Ahlin, waana in ay u muujiyaan xisbiyada bidixda in ay yahiin kuwa qatartak u ah danta codbixiyaasha dhexdhexaadka ah.
- Ma ahan xisbiga Socialdemokraterna kan hada qaba baahida ah in uu muujiyo dhibaato iyo iska horimaadka jira. Waa Moderaatka iyo alliansen kuwa ay dan weyn ugu jirto abuurista dhibaato iyo kale duwenaan weyn ayuu yeri David ahlin madaxa rugta Ipsos.